ALASKAN HUSKY IYO SIBERIAN HUSKY - EEYAHA
Alaskan Husky (bidix), Siberia Husky (midig) labadooduba waxay si firfircoon ugu raaxaystaan ​​jiidista iyo jiidista milkiilahooda barafka.
Alaskan Husky iskudhafka aan diiwaangashanayn ayaa laga doorbiday tartanka eyda. Waxaa asal ahaan loo adeegsadaa ujeedooyin shaqo, si ka duwan Siberian Husky oo loo isticmaalo bandhigyada iyo ujeedooyinka shaqada labadaba. Alaskan Huskies si taxaddar leh ayaa loo soo saaray si loo soo saaro eeyaha ugu fiican ee suurtogalka ah. Noocyada Alaskan Husky waa noocyo la qorsheeyay oo farsamo ahaan lagu abtirsado, si kastaba ha noqotee looma tixgelinayo inay nadiif yihiin oo kama diiwaan gashan yihiin AKC ama CKC maxaa yeelay mararka qaarkood waxay ka gudbaan noocyada kale ee Waqooyiga iyo kuwa aan reer Waqooyiga ahayn si ay u soo saaraan eeyaha shaqeeya ee ugu wanaagsan ee suurtogalka ah. Alaskan Husky wuxuu ka duwan yahay Siberia Husky, oo ah eey saafi ah oo ka diiwaan gashan AKC iyo CKC waxaana loo isticmaalaa sida eey bandhig iyo waliba eey shaqeeya.
dibi lagu qaso feedhyahan
Tartanka jiida ee sled-ka Alaskan Huskies waxaa badanaa loo isticmaalaa tartamada masaafada dheer iyo Siberia Huskies waxaa badanaa loo isticmaalaa tartamada masaafada gaaban. Eeyaha lugaha leh ayaa lagu yaqaan inay safraan in ka badan 100 mayl muddo 24-saac ah.
Muuqaalka caqliga leh, Alaskan Huskies ayaa badiyaa ka jilicsan dhismaha marka loo eego reer Siberiyaanka oo leh soojiidasho aad u muuqata. Sibeeriyaanku badanaa waxay leeyihiin buluug ama isku darka indhaha buluug iyo bunni, halka Alaskan Huskies ay badanaa leeyihiin indho bunni ah.
poodle toy khudaar toy buuxa koray
Miisaanka: Ragga 45 - 60 rodol (20 - 27 kg) Dumarka 35 - 50 rodol (16 - 22½ kg)
Miisaanka: Ragga 40 - 60 rodol (18 - 27 kg) Dumarka 35 - 48 rodol (16 - 22 kg)
Isgoysyada u dhexeeya Alaskan Husky iyo Siberian Husky waxaa lagu magacaabaa Alaskan Amerindian Huskies. Noocan ah Husky waxaa la bilaabay 1970-yadii.
Alaskan Husky (bidix), Siberian Husky (midig)
pups feist mt for sale
i tusin sawirada collies soohdinta
shakhsiyadda jer russell rat Terrier
shaqaale Mareykan ah